Iterable: A Cross-Channel Uto Marketing Platform | Martech Zone
Fraịde, Septemba 13, 2019 Fraịde, Septemba 13, 2019 Douglas Karr
Ezigbo bụ usoro azụmaahịa na-eto eto nke na-enyere ụdị aka ịmepụta, mepụta ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị na-edu ndú, dị ka Zillow, SeatGeek, na Igbe, họrọ Iterable ka ike ndị ahịa na-etinye aka na ndụ ndụ niile yana nkwenye ọdịnaya na mgbanwe data enweghị atụ.
Nkwado Ndị Ahịa Cross-Channel
Ahụmịhe ndị ahịa ụwa na-amalite site na isi ihe ise dị mkpa maka ọganiihu azụmaahịa: njirimara ndị na-ege ntị, ntinye data na-agbanwe agbanwe, usoro mgbasa ozi ndụ, njiri mara omume na njikarịcha arụmọrụ.
Nkebi nke ndi na ege nti
Ghọta njirimara na mmasị ndị ahịa ọ bụla site na ịchekwa ọtụtụ narị ebe omume igwe mmadụ na omume omume maka profaịlụ onye ọrụ ọ bụla. Dynamic kewapụrụ ndị debanyere aha gị maka mkpọsa ezubere iche siri ike, wee mepụta ndị na-ege ntị na ndị ọrụ retarget na mgbasa ozi mmekọrịta.
Leverage niile ndị debanyere aha gị 'omume igwe mmadụ, omume na ihe omume data-ma n'ime na site na ndị ọzọ-na ezigbo oge na-akpalite ahaziri ozi na mkpọsa.
Datadị data mgbanwe na-agbanwe agbanwe, API nke oge a na webhooks zuru ụwa ọnụ na-enweta ozi site na isi mmalite ọ bụla na-enweghị njedebe.
Ihe mejupụtara Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Chepụta ọkaibe ahịa mkpọsa, na ịkpalite mkpa ozi n'ofe email, mobile push, SMS, na-eji ngwa, web push, direct mail, social retargeting and more.
Iterable na-adọkpụrụ na-dobe Workflow Studio na-enye gị ohere itinye nzacha, ịtọ oge oge, gbanye akpaghị aka ma rụọ ọrụ izi ozi n'otu ikpo okwu.
Alizationdị Omume Na-adịghị Agbanwe Agbanwe
Kwado mkparịta ụka mmekọrịta gị na ndị ahịa ọ bụla site na ịmepụta ozi ezubere iche nke pụrụ iche nye ha, n'oge ahụ, ebe ọ bụla ha nọ.
Wulite ọdịnaya nke ọdịnaya dị mfe nke Iterable dị mfe, njikwa njikwa aka dị elu, nri data, yana snippets tozuru etozu.
Ndepụta Ndekọ Ọdịnaya Katalọgụ dị iche iche
Katalọgụ bụ igwe eji eme ihe metadata na-arụ. Na Iterable Katalọgụ, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmepụta ahụmịhe izi ozi nke onwe ha sitere na data ndị ahịa nke mbụ-ihe niile site na nkọwa profaịlụ nkeonwe na mmasị omume omume rụrụ arụ. Katalọgụ na-arụ ọrụ zuru oke nke data dị na nchịkọta ahịa, na-eme ka o kwe ndị ahịa mfe ịmepụta ahụmịhe ahịa dị ike na-adaba na njikwa ahịa ahịa zuru oke.
Tupu e jiri katalọgụ, ngwa anyị nwere naanị inye ọnye ahịa n'elu 5 ndepụta nke ogige ndị dị na steeti ọ bụla dị ka aro. Anyị enweghị ike ịkwado ebe ndị a na-ama ụlọikwuu maka ndị ọrụ dabere na profaịlụ ha. Mgbe anyị na mmejuputa iwu-Katalọgụ, anyị dum ahịa atụmatụ gbanwere na-egwu onye campground matchmaker na anyị na ndị ọrụ-bridging ọdịiche dị n'etiti ndị mara ụlọikwuu na maa ụlọikwuu. Anyị nwere ike ịkekọrịta n'ụzọ ndị a na-ahụtụbeghị mbụ. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịbawanye ikike anyị nwere ike ịkwado ebe a na-ama ụlọikwuu, kamakwa ịnye ogige nke ahaziri iche maka onye ọrụ ọ bụla.
Anthony Easton, Onye isi ndị na-ege ntị na Ndị Dyrt
Terụ Ọrụ Kacha Mma
Ezubere Insight Insights iji nyere gị aka iji anya nke uche hụ mkpọsa gị, soro arụmọrụ gị, wee mee ngwa ngwa. Họrọ site na ụdị eserese dị iche iche, nye ndepụta mkpọsa mkpọsa ma bulie ihe ịga nke ọma mkpọsa gị na akụkọ ọdịnala na dashboards.
Nnwale meziwanye usoro mgbasa ozi dị oke egwu site na nyocha A / B siri ike na nnwale dị iche iche na-akpaghị aka họrọ ọdịnaya mmeri iji bulie oghere, pịa yana ntụgharị.
Hazie oge ngosi